Sea munyu - Unoziva mabhenefiti emuviri nebvudzi here? | Bezzia
Zvakanakira zvegungwa munyu kumuviri uye bvudzi
Susana godoy | | Runako
Wanga uchiziva here kuti munyu wegungwa une mabhenefiti makuru kumuviri nebvudzi? Ehe, hongu, rubatsiro rwakakura uye kana wanga usingazive, yave nguva yekuti iwe uzviite. Nekuti zvirokwazvo unayo kumba kuti uwedzere kuravira kune ako akanakisa ndiro, saka ikozvino iwe unogona zvakare kupa iyo kushandiswa kutsva kune zvese ganda nebvudzi uye nemhedzisiro yakanaka.
Munyu wegungwa une zvimiro zvakawanda nekuti ndechimwe chezvakanyanya kugadzirwa. Saka kana iwe uchida kunyudza mabhenefiti ayo makuru, haugone kurasikirwa pane zvese zvinotevera. Iye zvino unogona kuchenesa, kuchenesa uye nezvimwe zvakawanda ganda rako nebvudzi. Ichokwadi kuti iwe unogona kunge uine zvimwe zvigadzirwa asi mune iyi kesi, iwe unofanirwa kuedza.
1 Munyu wegungwa unochenesa zvakanyanya ganda rako
2 Inoburitsa ganda
3 Inoderedza cellulite
4 Mushonga webvudzi rine mafuta
5 Dzivirira mburwa
Munyu wegungwa unochenesa zvakanyanya ganda rako
Dzimwe nguva tinova neshungu nekukwanisa kuratidza ganda rakachena zvachose. Asi hazvisi nyore nguva dzose kuzviita, saka tinoda zvigadzirwa zvinozviita mune imwe nhanho. Saka, gungwa munyu ndeimwe yavo nokuti ine antiseptic properties chii chinoita kuti ganda redu ripore. Nekudaro, pamusoro pekuchenesa, inoiuraya zvakare, saka kana uine chero rudzi rwedambudziko nayo kana kukuvara, zvirokwazvo inopora nekukurumidza kupfuura zvaunofunga.
Pamusoro pekuchenesa, zvakare yakanakira exfoliating ganda. Kamwe pavhiki tinofanira kuita exfoliation yakanaka paganda. Chikonzero hachisi chimwe kunze kwekuchenesa ma pores nenzira yakakwana, kumisa kutenderera uye hongu, rega kuvandudzwa kwesero kuite nzira yayo, kubvisa marudzi ese etsvina. Saka, tinogona kutaura kuti inzira ye oxygenate ganda uye saizvozvo, ichava chiito chakakwana kune zvose chiso nemakumbo kana maoko, nezvimwewo. Iwe unozoonekana kune chepfu nekuda kwezvicherwa zvine munyu wegungwa. Iye zvino iwe hauchadi chero chimwe chigadzirwa!
Ndiyo imwe yezvinetso zvinowanzoitika. Cellulite inotora ganda redu uye zvakaoma kutaura zvakanaka. Asi ikozvino unogona kumisa kutenderera nekuda kwemunyu wegungwa uye musanganiswa wauchawana nekuwedzera zvishoma zvenguva yako moisturizer. Kamwe pavhiki unogona kushandisa musanganiswa uyu panzvimbo yakakanganiswa. Kana tichiita masaja, isu tinomutsa ropa sezvatakareva, asi isu tichaderedzawo mafuta akaunganidzwa.
Mushonga webvudzi rine mafuta
Muchiitiko ichi, tinoda kudzora mafuta emusoro uye panguva imwe chete inofarirawo kukura kwebvudzi. Saka ndozvatinouraya shiri mbiri nedombo rimwe chete. Iyo nzira iri nyore kwazvo, nekuti iwe unongofanira kusanganisa maspuni maviri emunyu wegungwa nezvikamu zviviri zve shampoo. Uyu ndiwo uchava waunosarudza. Iye zvino iwe unongofanirwa kukwiza zvinyoro nyoro scalp yese kwemaminitsi mashoma. Iwe ucharega mamwe akati wandei azozorora uye ipapo iwe unobvisa zvachose nemvura yakawanda.
Kutenda kune chokwadi chekuti munyu wegungwa unochenesa zvakakwana, inodzivirira pores kubva pakuunganidza tsvina uye nekuda kweizvi mapundu anotyisa anoonekwa anove mapundu asingakundike. Muchiitiko ichi, ndiyo zvakare maminerari akadai se calcium anotibatsira kuti tive neganda rakajeka risina mapundu kana mapundu. Kuti uite izvi, unoda chipunu chemunyu uye chiyero chakafanana chemvura chauchavhenganisa zvakanaka kuti uwedzere madonhwe mashomanana emafuta e rosehip. Zvadaro, iwe unongofanirwa kuishandisa kumeso uye kumirira anenge maminetsi gumi. Bvisa nekugeza nemvura uye wozora yako moisturizing facial cream. Iwe zvechokwadi unozoona shanduko!
Yakazara nzira kuchinyorwa: Bezzia » Runako » Zvakanakira zvegungwa munyu kumuviri uye bvudzi